Posted by ကို Tranquillus | စက်တင်ဘာ 20, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
သင့်ရဲ့စီမံကိနျးအတှကျလေ့ကျင့်ရေးတို့အတွက်ရန်ပုံငွေညှိနှိုင်းရန်သို့မဟုတ်ပဲသင့်ရဲ့စိတ်ကူးများကိုတင်ပြပေးဖို့ရှိမရှိ, ကခွက်တဆယ်ပင်မဟုတ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်သင်တို့အဘို့, သှေးဆောငျ၏အနုပညာကျွမ်းကျင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒီနေရာတွင်အားလုံးအခြေအနေများတွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်သောငါတို့အကွံဉာဏျဖြစ်ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့အသက်တာ၌ကရေရှည်အတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိသည်ဖို့အရေးကြီးပါသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်, သင်နှင့်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သော့ချက်ကစားသမားစောင့်ရှောက်နိုင်စေဖို့တခါတရံအသုံးဝင်သောယဇျပူဇျော, လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာကသူတို့ချစ်ခင်ဝင်ငွေနေချိန်မှာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်သည်သင်၏အတွေးအခေါ်များဝတ်ဆင်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်, သင့်အနေအထားစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင်၏သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းဆံ့မခံပါဘူးဒါကြောင့်တိုကျရိုကျတိုက်ခိုက်မှုများရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဆိုပါလှည့်ကွက်သင့်ရဲ့တင်ဆက်မှုတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးကြားနေလေသံကိုစောင့်ရှောက်နှင့်သင့်ငြင်းခုံတွေဟာအစာကြေသို့မဟုတ်နားလည်ရန်သင့်ပရိသတ်ကိုအချိန်စွန့်ခွာရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့လုံလုံလောက်လောက်သက်ဆိုင်ရာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ပရိသတ်ကိုကအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်။
cons အသုံးပြုပုံ သင်၏စီမံကိန်းကိုတင်ပြ သို့မဟုတ်သင်၏မေးခွန်းသည်မေးခွန်းပုံစံဖြင့်သင်၏နားထောင်သူများအားအတည်ပြုပေးရန်တောင်းခံခြင်းနှင့်တူညီသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအမှားထဲမကျမိစေနဲ့။ သင်၏အကြံဥာဏ်များသည်အပေါ်ယံမျှသာဖြစ်ဟန်ရှိသည်ဟုသင်စိုးရိမ်ပါက၎င်းကိုမပြပါနှင့်။ သင်၏ဝေါဟာရမှ "ငါထင်တယ်" သို့မဟုတ် "ဖြစ်နိုင်သည်" ကိုပိတ်ပင်ပါ။ သင်၏စကားများကသင်၏အငြင်းပွားမှုများအပေါ်သင်၏ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြောင်းသေချာစေပါ။
သင့်ရဲ့မိန့်ခွန်းရိုက်ချက်များပြင်ဆင်ထားရန်, သင်စကားပြောတော်မူသောပရိသတ်ကိုအမျိုးအစားအကြောင်းကိုကြိုတင်လေ့လာပါ။ ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, တန်ဖိုးများ, အလေ့အထများ, လိုအပ်ချက်များနှင့်အခြားသူများကိုငါသိ၏။ သငျသညျအစည်းအဝေးတစ်ခုသို့မဟုတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာချမှတ်ရန်နှင့်သင့်အစေးကျရှုံးပိုပြီးတိကျတဲ့ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုသေံသိကြပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံခဲ့သည်ခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်။
သူတို့ဆက်စပ်မှုသက်သေခံသရုပ်ဖော်ပုံများကထောက်ခံလျှင်ထိုမှတပါး, သငျသညျရှေ့ဆက်သွားနေသောအငြင်းပွားမှုများနှင့်အတွေးအခေါ်များပိုပြီးအလွယ်တကူစိတ်အတွက် grounded လိမ့်မည်။ ဗီဒီယိုကို format နဲ့, ဓါတ်ပုံ, ဂရပ်ဖစ် form မှာကောင်းစွာသူတို့ကိုပြင်ဆင်ပါ, ဒီသင်၏စကားမှအလေးချိန်ကိုငါပေးမည်။ သင့်ရဲ့အများပြည်သူသင့်ရဲ့အယူအဆ, အတွေးအခေါ်များ, အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုရှင်းလင်းအမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ထို့နောက်သင့်တင်ဆက်မှုဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး, သင်သည်သင်၏စီမံကိန်းကိုသို့မဟုတ်သင့်စိတ်ကူးများအားပေးရအပ်နှံအလေးပေးနိုင်အောင်သင်၏စကားရန်သင့်အမူအရာပေးဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ပရိသတ်ကိုဆီသို့မိမိခေါင်းကိုကွေး၏တကယ်တော့အများပြည်သူ၏အဖွဲ့ဝင်များကလုပ်ပြန်စပ်လျဉ်းအကျိုးစီးပွားဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ပါတယ်။ cons ကိုသင်ပြင်ပသဘောထားမှတ်ချက်မှပိတ်လိုက်ကြသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်လက်နက်ပြပွဲအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ကျနော်တို့ထပ်ခါထပ်ခါထပ်မစောင့်, ပြုံးကူးစက်တတ်သောကွောငျ့ပြုံး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ထွက်သောလူသား၏သဘာဝနှင့်သတိလစ်အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ပြီးတော့သဘာဝကျကျမည်။ ဒါကြောင့်ပြုံးဖို့စဉ်းစား, သင့်စိတ်ကူးများအသုဘခေါင်းကိုထက်ပိုပရိတ်သတ်တွေဖြစ်လိမ့်မည်။
မည်သည့်စီမံကိန်းအတွက်ကအဘယ်သူအားမျှစုံလင်ခြင်းရှိလို့ယူဆတယ်ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးအမှားရှိစေခြင်းငှါသတိရပါ။ သို့သျောလညျး, သငျဖို့သင့်ပရိသတ်ကရှိုးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးအတွက်သင့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုထောက်ပြသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်စေရန်ခွင့်ပြုပါ။ reformulating by မဟုတ်ရင်သင်သည်သူတို့၏တောင်းဆိုချက်များကိုနှင့်လိုအပ်ချက်များသင့်ရဲ့နားလည်မှုအတည်ပြု, မက်ဆေ့ခ်ျကိုစေလွှတ်။ , ဒီသဘောထားသစ်ကိုစိတ်ကူးများရန်သင့်ပွင့်လင်း၏အများပြည်သူသေချာနှင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များကိုစည်းကြပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ထင်စေခြင်းငှါ, သူတွေကိုစိတ်ချလိမ့်မယ်။
သငျသညျဆိုပါကသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုသငျသညျသူသညျမိမိအကျိုးစီးပွားပေးရန်မယ်လို့အဘယျကွောငျ့သငျသညျလုံးဝသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကိုသင်တို့ရှေ့မှာတင်ပြပြီအကြံဥာဏ်များပေးရန်ကိုတံဆိပ်ခတ်ပုံရသည်? သူတို့အလှည့်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု၏လမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုသူတို့ပေးသောသူတို့၏တင်ပြချက်များစဉ်အတွင်းဒီတော့သူတို့ကိုသင့်ရဲ့အပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သူတို့ကိုသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့ကိုသေချာနှင့်အပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုနှိုးဆှလိမ့်မည်ဟုဆိုင်တဲ့မေးခွန်းများကိုမေးပါ။
ငါတို့သည်လည်းမိမိတို့၏မျိုးရိုးအမည်ဖြင့်သမုတ်သူတွေကိုစဉ်းစားခံစားရကြောင်းသတိပြုပါ။ ကျွန်တော်နာမည်ဖြင့်မခေါ်ကြဘူးလာသောအခါအမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်တစ်ဦးအခြို့သောပျော်မွေ့ခြင်းခံစားရသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအမြဲတမ်းဖြစ်ဘို့, နေပါစေအရာဝတ္ထု, ဒါကြောင့်သာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ကန့်သတ်ပါဘူး, သင်၏ဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းပြုကြလော့။ ဒါကြောင့်သင်သှေးဆောငျသငျ့ပါဝါတိုးမြှင့်မည်ခေါ်ဆိုသူ၏တိုက်ရိုက်ဟောပြောလော့။
သို့သော်ခက်ခဲသည်တပါးအမျိုးသားတို့၏အငြင်းပွားမှုများကိုလက်မခံ, ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းသူ့ကိုယုံဖို့။ အဆိုပါတင်ပြချက်ကြောင့်အတားအဆီးကိုချိုးဖျက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျသူမ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းလူစိမ်းရှိနေဆဲအဖြစ်အမှန်စင်စစ်သမျှသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဆက်စပ်မှုကိုသင်ဦးဆောင်လမ်းပြစီမံကိန်းကို၏အရေးပါမှု, သင့်မိတ်ဖက်အမြဲသင့်ရဲ့အငြင်းပွားမှုများအပေါ်သံသယရှိသည်။ မျှသာသင်တစ်ဦးသဘောတူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အဘယ်အရာကို type ကိုပြသပါ။
တတ်နိုင်သမျှယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်စေရန်, ဟန်ဆောင်ဖို့ "မလိုဘဲ, သင့်စိတျဝငျစားသောအတွေးအခေါ်များနှင့်အငြင်းပွားမှုများသို့မဟုတ်ဘာသာရပ်များထောက်ခံပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်သူတို့ support သည့်အကြောင်းရင်းများအားဖြင့်ထင်ရှားစွာပုဂ္ဂိုလ်များသဘာဝကျကျသူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့သငျသညျဆိုပါကသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်, သင်သည်သင်၏အတွေးအခေါ်များ, အငြင်းပွားမှုများသို့မဟုတ်စီမံကိန်းများတွင်ယုံကြည်ပါတယ်။
သှေးဆောငျ၏အနုပညာကိုလည်းသင်၏အကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ vis သည်းခံခြင်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်သင့်သဘောတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်အကြောင်းကိုသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သငျသညျအသုံးမကျသောပုံပေါ်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့တင်ပြချက်နှင့်သင့်ငြင်းခုံမှာလျှင်တူညီသောလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်လက်မထားပါနဲ့။ အမှန်စင်စစ်, သင့်ပရိသတ်ကိုသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုအပြင်းအထန်တောင်းဆို။ သင့်ရဲ့တင်ပါတယ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကပိတ်ပါ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တိုးတက်လာဖို့အချိန်မပေးပါဘူး။
ဒါ့အပြင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့, သင်ပိုကောင်းသူ၏မိန့်ခွန်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သူ့ကိုသိရန်ရှိသည်။ သငျသညျဆက်ဆက်သငျ့ပရိသတျ၏အမျိုးမျိုးသောကြားဝင်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုလဒ်တိုးတက်စေပါ။ ပုံမှန်ဒီဦးတည်လေ့ကျင့်ခန်း, သင်သည်များစွာသောနောက်ထပ်ရလဒ်များအတွက်သေချာဘို့လာကြလိမ့်မည်။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ် setting ကိုအတွက်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? နိုဝင်ဘာလ 25th, 2018Tranquillus
ကြီးကြပ်ရေးမှူးတစ်ဦးမှတောင်းပန်အီးမေးလ် template ကို